Global Voices teny Malagasy » Simban’ny Fahafatesan’ny Tanora iray Ny Fitokian’ny Vahoaka Amin’ireo Manampahefana ao Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Avrily 2017 12:05 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanampenam-bava, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika
Fifandonana teo ivelan'ny sekoly taorian'ny nahitàna ilay tanora maty. Pikantsary tao amin'ny Youtube.
Herinandro taorian'ny niparitahan'ilay lahatsary iray, nampiseho ny vatana mangatsiakan'ny mpianatra iray 14 taona maty nitsirara teo amin'ny tany, dia tabataba be ny tao amin'ny media sosialy Shinoa. Vao mainka solika nararaka teo ambony afo ny zara fa fanehoankevitr'ireo manampahefana ao an-toerana, izay namoritra ireo miresadresaka iny tranga iny.
Tao Luxian, tanànan'i Luzhou, faritanin'i Sichuan no niseho ny raharaha tamin'ny 1 Aprily teo. Ilay mpianatra, fantatra amin'ny fanampin'anarany Zhao, dia nianatra tao amin'ny Taifu Middle School. Vetivety dia niparitaka ny honohono momba ny fomba nahafaty azy.
Ny andro taorian'io, nilaza ireo manampahefana ao an-toerana fa tsy nisy porofo manamarina fa vono olona no nahafaty an'i Zhao. Ary ny 3 Aprily, mpisera efatra ety anaty aterineto no nosamborin'ny polisy rehefa notondroina ho ‘nandrisika ny olona sy nanohintohina mafy ny filaminambahoaka.”
Nefa marobe no mbola nino fa niharam-boina noho ny herisetra mpiseho ao amin'ilay toerana fonenan'ny mpianatra ilay tovolahy. Ny vinavina be mpizara indrindra dia ny hoe nodarohanà mpianatra dimy hafa mandra-pahafatiny i Zhao satria tsy nandoa ny saram-piarovana 10.000 yuan ($1,450) tamin'ny vondrona mpampijaly iray ao an-toerana.
Nisarika olona marobe ho eny akaikin'ny sekoly ilay tranga, nitaky tamin'ireo manampahefana hamoaka ny antsipirihany, isan'ireny ny fanarahamaso avy amin'ny fahitalavitry ny sekoly (camera de surveillance). Ity ambany ity ny lahatsary ahitàna ireo olona nitangorona:
Ho valiny, nobahanan'ireo manampahefana ny arabe miditra ao Luxian. Herinandro taty aoriana, tohizan-dry zareo ny fampanginana ireo ‘honohono’ manodidina ilay tranga ary nosakanany tsy hiresaka amin'ireo mpianatra sy ireo manampahefana ao an-tsekoly sy ny fianakavian'ny noharam-boina ireo mpanao gazety, ary mandritra izany ihany koa dia mandà ny tsy hanome porofo ho an'ny daholobe fa hoe loza tsy nahy tokoa no nahafaty an'i Zhao.
Na ilay media mpilaza vaovao miankina amin'ny fanjakàna aza dia tsy nanana faharetana ary nanome tehamaina ireo manampahefana ao an-toerana noho ny fibahanana ireo mpanangona vaovao tsy hiresaka amin'ny fianakavian'i Zhao. hoy ireo mpitatitra vaovaon'ny Xinhua News nanoratra :
Ny 4 Aprily, nandray ny làlana 20 km nankany an-tanàna ireo mpanangona vaovao mba hialàna amin'ilay fanakanana ny arabe ary hitafa amin'ny raibe sy renibe ary mpiray sekoly amin'ilay niharam-boina. Saingy nopehan'ireo manampahefana tao an-toerana ry zareo, izay nitsabaka tamin'ny tafatafa nifanaovanay, narahana karazana fandrahonana samihafa. Nandà tsy hiresaka daholo ireo rehetra nifampiresahana. Nahazo filàmbaniny tafahoatra an-telefaona daholo koa ireo mpanangona vaovao.
Notanisain'ilay tatitra ihany koa ny momba ireo mpisera ety anaty aterineto avy amin'ilay sehatra media sosialy malaza Weibo ary nanainga ireo manampahefana ao an-toerana hiatrika ny olan'ny vahoaka:
Tsy nampanao fitsirihana ny razana akory [ireo manampahefana]. Ahoana no fomba nahafahany nanilika ny fisian'ny vono olona? Ankehitriny ianareo mangataka anay hiandry, tena feno zavatra mifanohitra an!
Lavo dia maty no vokany, ahoana no ahafahana mampiasa izany hanilihana ny fisian'ny vono? Ny fahalavoana dia mety nateraky ny hery hafa ivelany. Raha famonoantena ilay izy, aiza ny taratasy milaza ilay famonoantena? Raha misy idiran'ireo mpampijaly ao an-tsekoly ilay tranga, tsy tokony haka am-bavany azy ireny ve ny polisy? Ahoana no ahafahan-dry zareo mamintina ny raharaha haingana be, tsy nisy akory fijerena izay ahiahin'ny olona?
Ny fanehoankevitra sarotra be nataon'ireo manampahefana ao an-toerana dia vao mainka tsy nampatoky ny olona. Olona iray mpampiasa Weibo no naneho ny hadisoam-panantenany:
Inona no marina ao ambadiky ny tranga niseho tao Luzhou ? Lasa miha-hafahafa ny zavatra rehetra. Betsaka ny olona no nanomboka tsy niresaka intsony sy tsy afaka miresaka. Ny hany sisa tavela dia vondrona iray “mavokely bitika” [tia tanindrazana ety anaty aterineto] izay mbola manohy sarintsarim-pahazoana fafiny [manao “firaisana” amin'ny firenena]…tena maharikoriko. Tena mahatsiaro diso fanantenana mihitsy aho amin'ity firenena ity.
Ilay ‘Fandrika Mifono’
Tang Yinhong, mpampianatra psykôlôjia, nanoratra tao amin'ny WeChat  ny zavatra niseho tany Luxian ho toy ny “Fandrika Mifono” (nofafàna ny lahatsoratra niaingàna. Dika avy amin'ny tahirin'ilay lahatsoratra, nataon'i Letscorp, bilaogy tetezamita Shinoa iray):
Tsy sarotra ny hanaporofoana ny filazan'ireo mpisera ety anaty aterineto hoe diso ilay tantara. Mila mamoaka vaovao misimisy kokoa ireo manampahefana dia hirodana ireo tsahotsaho… Kanefa, tsy nanao izany ireo manampahefana ary toy ny mahazatra, ny fomba fiasa iantohany ny fahamarinan-toerana no noraisiny, ary niteraka fifandonana teo amin'ny fanjakàna sy ny vahoaka… Vantany vao nanomboka nifehy ny vaovao ry zareo ary nanakana ny vahoaka tsy hiresaka, nipoaka ny sahoan-dresaky ny olona. Na nilaza ny marina aza ireo manampahefana, tsy misy olona hino an'izany eo. Ny toedraharaha tahaka izany no antsoina hoe “Fandrika Mifono” amin'ny siansa politika. “Raha very ny fitokiana amin'ireo manampahefana, tsy misy iraharahaina intsony izay ataony sy lazainy, ny mifanohitra amin'izay foana no ataon'ny fiarahamonina”. [Fitanisàna iray avy amin'ny kabarin'ny Filoha Shinoa Xi Jinping].
Làlana mankaminà vanimpotoana iray any aorian'ny marina no nosokafan'ireo Shinoa tompom-pahefana, hoy i Tang nanindry:
Ireo lazaina fa honohono dia mazàna tsy nafafifafy ho amin'ny tanjona ratsy. Manampy eo ambonin'izay tantara niaingàna fotsiny ny olona rehefa mizara ny vaovao. Ary ny farany dia lasa honohono manimba ireo. Amin'ny tranga sasany, misafidy ny handray anjara amin'ny fanelezana tsahotsaho manimba ny olona satria tena mino tanteraka izy ireo fa marina izy ireny. Ny zavatra niainany mivantana no lasa fototry ny fomba fijery sy ny fitsaràn-dry zareo.
Indrisy, raha mbola ny fitsinjovana ny filaminana foana no ampiasaina mba hamoretana ny fomba fijerin'ny olona sy hanafoanana ireo “honohono”, ho sarotra ho an'ny “fahamarinana” ny hamàka ao am-pon'ny vahoaka. Izany no antony tsy ahafahako miteny momba ilay tranga mifanaraka amin'ny hoe inona no marina na diso. Tsy mihevitra aho hoe manana fototra matanjaka be ny fomba fijerin'ny olona; saingy tsy afaka aho ny handresy lahatra ny olona hino ny filazàna ofisialy (tsy vitako akory aza ny hitsara, raha ny tena marina). Raha ny hevitro, rehefa voafehy na voabahana ny vaovao avy amin'ny lafy iray, tena ilaina ny mitandrina fatratra sy manontany ny hevitry ny ankilany momba ilay tantara.
Noho izany, ny sosokevitro dia ity, ilaintsika ny mampifanaraka antsika amin'ny toedraharaha rehefa apetraka anaty farango sosona ny “fahamarinana”. Ny fitsarànao dia hiorina eo ambonin'izay fomba fijerinao, ny zavatra niainanao sy ny soatoavinao, ary tsy voatery hifototra amin'izay tena zavatra nisy.
Tsy ampy ao Shina ny fahalalahana manao gazety sy ny zo hanangana malalaka fikambanana iray, raha hita eny rehetra eny kosa ireo ezaky ny milina fampielezankevitra sy fanivànan'ny fanjakana. Ao anatin'ny tontolo iray “any aorian'ny marina” tahaka io, noraràna tsy hilaza ny marina ny fiarahamonim-pirenena sivily sy ny media, tsy toy ny toedraharaha iainana any amin'ny firenena tandrefana sasany amin'izao fotoana izao. Lasa mamela ny olona hanaiky izay filazàna ofisialy izany, na hifikitra amin'izay inoany, izay angamba tsy mifototra mafy amin'ny tena zavatra nisy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/25/98021/
 nanoratra tao amin'ny WeChat: https://www.letscorp.net/archives/117752